‘बिग बोस’बाट निस्केपछि पागल भईन् रतन ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘बिग बोस’बाट निस्केपछि पागल भईन् रतन !
Published On : October 17, 2013
ठुलोपर्दा डटकम। पछिल्लो हप्ता ‘बिग बोस’को घरबाट बाहिरिएकी भारतिय टिभि एक्ट्रेस रतन राजपूतलाई बिस बोसको घर कुनै पागलखाना जस्तो लाग्न थालेको छ। अब उनका लागि मनोरोग विशेषज्ञको जरुरत परेको छ जसले उनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्छ, बिग बोसलाई व्यंग्य गर्दै रतनले बताएकी छिन्।
रतनले भनेकी छिन् की उनले बिग बोसमा सहभागि भएर गलत काम गरिन्। यसपालीको श्रृंखला हेर्ने कोहि पनि उक्त गेममा नजाने रतनले ठोकुवा गरेकी छिन्। सानोपर्दामा रतन चर्चित सेलेब्रेटी हुन्। टिभि शो बाहेक उनको कलाकारिताको पनि चर्चा हुने गरेको छ।
त्यसो त बिभिन्न कन्ट्रोभर्सीमा रतन नाम अगाडी आएको छ। स्वयंवरको मामला होस् या जबरजस्ती मादक पदार्थ सेवन गर्नुमा। रतन राजपूत पटनाकी हुन्। उनि मुम्बई आएर एक आम कलाकार जस्तै आफ्नो भाग्य चम्काउने सपना देखेकी थिइन्। उनको यो सपना साकार भएको छ, उनलाई नचिन्ने सायदै छन्।